Dowladda Soomaaliya oo dakhli ku dhow $200 milyan lumisay coronavirus dartiis - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo dakhli ku dhow $200 milyan lumisay coronavirus dartiis
April 24, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya Cabdirixamaan Ducaale Beyle. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dakhli ku dhow $200 milyan ayay lumisay Dowladda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah dhibbaatada xanuunka coronavirus, sida uu sheegay wasiirka maaliyada.
Wareysi uu wasiirka maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle siiyay BBC Somali ayuu ku sheegay in khasaare dhaqaale oo dhan 40% uu sababay coronavirus.
“Saameyn weyn buu Soomaaliya ku yeeshay sida wadamada kale sidaa daraadeed wax soo saarkii baa hoos u dhacaya, dadka dakhligii soo galayay baa hoos u dhacaya, canshuurihii yar-yaraa iyo wixii dhammaadeen, alaabihii dibada laga soo qaadayay waa iska yaraanayaan markaas dakhligii ka soo galayay garoonka iyo dekada, markaas waxyaabo badan oo 40% ayaa is dhimaya,” ayuu yiri.
Waxaana uu intaas ku daray in is-dhinkaas dakhli ay u dhiganto ilaa $200 milyan.
Bayle ayaa sheegay in ay wadahadal kula jiraan beesha caalamka gaar ahaan Bankiga Adduunka si uu uga caawiyo hoos u dhacaas iyo dagaalka ka dhanka ah coronavirus.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda diiwaangelisay 328 kiis oo coronavirus ah, iyo 16 dhimasho ah, sida ay muujinayso xogta Wasaaradda Caafimaadka.
April 25, 2020 Soomaaliya: 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah iyo labo dhimasho ah
Soomaaliya: 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah iyo labo dhimasho ah
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah Garoowe dib ugu soo laabtay kadib muddo dhowr asbuuc ah oo uu safar ugu maqnaa dalka Kenya. Dad shacab ah iyo masuuliyiin [...]